Sanchez oo sharaxaad ka bixiyay farqiga u dhaxeeya marka uu u ciyaarayo xulkiisa Chile iyo kooxda Manchester United – Gool FM
(Brazil) 22 Juunyo 2019. Xiddiga reer Chile ee Alexis Sanchez ayaa xaqiijiyay sida uu ugu raaxeysto marka uu xiran yahay maaliyada xulka qarankiisa, kaddib markii uu sameeyay bandhig cajiib ah labadii kulan la soo dhaafay uu ka ciyaaray Copa America, wuxuuna awooday inuu dhaliyo 2 gool.
Alexis Sanchez ayaa dhaliyay goolkii guusha kulankii ay arroornimada maanta oo Sabti ah la ciyaareen Ecuador ee ku soo idlaaday 2-1, taasoo ka dhigtay in xulka qaranka Chile uu u gudbo wareega siddeed dhamaadka ee Copa America.
Hadaba Sanchez ayaa ciyaarta kaddib wuxuu u sheegay saxaafada:
“Waxaan mar walba ku riyaaqaa xiisaha iyo xamaasada, lakiin England kuma helin fursadan oo kale dhawaanahan, farqiga waa mid iska cad, inaad matasho xulkaaga qaranka ayaa ah waxa ugu quruxda badan”.
“Marka aan u ciyaarayo xulkeyga qaranka, aad ayaan u faraxsanahay, waxaana muhiim ii ah inaan u ciyaaro dalkayga”.
Si kastaba ha ahaatee, Alexis Sanchez ayaa ah xiddiga ugu mushaarka sareeya horaalka Premier League, balse tan iyo markii uu yimid kooxda Manchester United ma uusan awoodin inuu sameeyo qaab ciyaareed uu ugu qalmo mushaarkan aadka u xoogan.
RASMI: Juventus oo heshiis cusub ka saxiixatay xiddig muhiim ka ah kooxdeeda